Ungayiphepha njani i-spam kunye neengcebiso zokuvala ulwazi lwakho lwangasese-i-NJ & NY yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuTyhilwa, ukuKhuselwa kweNdawo yokuTyhilwa kunye namaGqwetha okuBambisa
ikhaya / Blog / Ukuchithwa / Ungayiphepha njani ugaxekile kunye neengcebiso zokuvala ulwazi lwakho lwangasese
Kwaye, ngoku ufumana itoni yogaxekile kwi-imeyile yakho. Ngaba abantu bakuthumela iileta zikunika zonke iintlobo zeendlela ezahlukeneyo ukulungisa nayiphi na ingxaki abona ukuba yenzekile kungenzeka okanye akunakulinda? Okanye ngaba unalo ityala elisameleyo ngokuchasene nawe?
Olu luphononongo olukhawulezayo malunga nendlela yokunceda usike phantsi kuloo spam kunye ne-imeyile eyongezelelweyo. Kukho iinkampani ezinje ngabantu-abafumanisi okanye i-mylife.com eqokelela lonke ulwazi lwakho lomntu ngeerekhodi zikawonke wonke.
Bajika bayithengise kuye nabani na abanako. Kukho iinkampani ezinjenge searchbug.com ukuba nje zinegama kunye nedilesi zingathengisa ngokusisiseko idilesi yakho ye-imeyile ukuba ibinikwe bona ngexesha elinye okanye kwelinye.
Ukuya phambili kukho iindlela onokuthi ukhethe ukuphuma kuzo kolu luhlu. Ke ukuba awuphoswa yi-imeyile kubo.
Nazi ezinye iziphakamiso zokukunceda uphephe ugaxekile kwixa elizayo ufumana ngokwakho idilesi ye-imeyile yesibini kukho iwebhusayithi efana neyethutyana njenge-imeyile isebenza imizuzu eyi-10.
Ke xa kufuneka ugcwalise ifomu kwaye awusoze wafuna i-imeyile kwakhona kwaba bantu. Okanye, ungaya apho ukuze ufumane idilesi ye-imeyile dummy. Vula enye intengiso yakwaGoogle idilesi ye-imeyile.
Sebenzisa i-imeyile apho yonke i-spam kunye ne-junk yakho ithunyelwa khona ukuba ngaba i-imeyile yakho sele ilapho kwimbonakalo yehlabathi.
Kukho iindawo onokuya kuzo ngokungathi yenye yazo yiNethiwekhiadvertising.org. Banoluhlu lweqela leendawo ukuba ungena apho beka ulwazi lwakho apho ungabaxelela ukuba bayeke ukuthengisa ulwazi lwakho.
Esi sisikhumbuzo nje esikhawulezileyo sobuhlobo ngokungathi awufuni ogaxekile kukho iindlela onokwenza ngazo. Ukuba ufumene umyalezo nge-imeyile okanye ileta evela kuthi, kwaye uyacaphuka nathi.
Sixelele nje ukuba ngekhe siphinde sikuthumelele i-imeyile. Sifuna ukwenza nantoni na ukwenza ubomi bakho bube lula. Ngokwesiqhelo sinceda abantu ukuba balwe okanye benze amatyala abo. Ukuba sifikelele kuwe ngempazamo, siyaxolisa ngokungakuphazamisi. Yiba nosuku olumnandi. Enkosi